Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourne oo qabatay Shir uu kaqeyb Galay Hogaanka HAB Cabdiraxmaan Maaday.
Jaaliyada Ogadeniya ee Melbourne oo qabatay Shir uu kaqeyb Galay Hogaanka HAB Cabdiraxmaan Maaday.
Waxaa maalintii axada bisha march 4teedii dhacay shir heersare ah oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada somalida Ogadenia iyo ururka Ogaden youth and students ee Melbourne, shirkaas uu marti oogu ahaa hogaanka arimaha dibada JWXO Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo markii oogu horeysay socdaal ku yimid wadanka Australia.
Sidii caadada u ahayd shirarka jaaliyada waxaa lagu furay aayadaha qur’aanka oo Sh.Cabdiraxman uu aqriyay. Kadibna waxaa lagu soo dhaweeyay makarofoonka gudoomiyaha jaaliyada Melbourne cali ugaas, gudoomiyaha ayaa faahfaahin dheer ka siiyay wax qabadka jaaliyada sanadkii ugu dabeyey waxuuna halkaas uga mahad celiyey dhamaan ka soo qeyb galayaashi shirka iskugu yimid.
Waxaa lagu soo dhaweyey makarafoonka labo gabadhood oo da’dooduna jirto 10 ilaa 13 Muna iyo sumeya oo luuqada afka inglishka ku soo jeddiyay qudbad ay mahad celin ugu soo jeedinayaan Masuulka martida ugu soo booqday wadanka Australiya iyo hawsha uu wado ee geedi socodka halganka ogadeniya ee JWXO, waxay kaloo dhalinyaradu uu sheegeen mudane Maadey in ay ku naaloonayaan shaqaduu hayo ay halkaa ka sii wadayaan.
Waxaa kale oo shirkan ka hadlay oo lagu soo dhaweeyay odey dhaqameedka oo uu hormuud u yahay Cabdiraxman Shuuriye waxuuna halkaas ka soo jeediyay taarikh, isagoo dadkii ka soo qeyb galay shirka ku baraarujiyey sidii loo taageeri lahaa halganka Ogadenia ka socda ee hogaaminayso JWXO.
Waxaa warbaahiya lagu soo dhaweyey gudoomiyaha ururka dumarka Faadumo axmed nuur oo halkaas ka jeedisay hadal aad u qiima badan kuna shaacisay in ay dumarku hormuud u yihiin halganka Ogadenia. Waxa ay aad iyo aad ugu mahad celisay dhamaan dumarkii ka soo qeyb galay iyo inta maqanba waxaa kale oo hadalkeeda raacisay halganka Ogadenia meesha uu ka gaabinayo haddi la isqiimeeyo in uu dhanka raga yahay balse wakhtigan xaadirka ah inuu ka maarmi doono wax matarayaasha oo dhan’ Waxayna sheegtay badalkooda in gabadha heer Ogadenia iney wadi doonaan oo ay u dhiman doonaan halganka.
Waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay hogaanka Arrimaha Didaba ee JWXO Abdiraxman Sh. Mahdi oo ka war bixiyey taariikhdii halganka Ogadenia soo maray iyo halka hada lamarayo. War bixin dheer ayuu siiyay ka soo qeyb galayashi shirka, isaga oo aad uga waramaya shir qoolka itoobiya ay maleeygaso iyo qorshayaashooda faashilka ah.
Waxaa kale Hogaanku ugu baaqay dhamaan aqoon yahanada iyo dhalinyarada Ogadenia ee qurbaha joogta iney digtoonadan oo halganka qeybtooda ka qaataan. waa lama huraan iney wadankooda u guntadaan kuna difacaan codkooda iyo waxuu ilaahay baray. Hoggaanku isaga oo Somaliweyn la hadlaya Waxaa kale intaas ku daray Dhulka Ogadeniya waa dhul Somaliyeed oo Somali baa leh, shacabka somaliweyn waxa uu usoo jeediyay Amaan uu ku amaanayo inay kaalin wayn kaga jiraan halganka Ogadeniya. Waxa uuna dhaliil aad u xoog badan u soo jeediyay maamul goboleedyada Somaliya.
Shacabka somaliyeed waa wadani ilaa hada halganka waxa wada dad somaliyed meel kasta oo ay joogaan. Gudoonku Waxaa kale oo uu ka hadlay kheyraadka wadanka Ogadeniya oo u ku sheegay innuu yahay dhul kheyraad badan, webiyo badan leh, shidaal badan leh,xoolo badan leh… intaas waxuu kaluu raaciyay warbixino la xidhiidha shirkadaha shidaalka iyo kuwa qodotada ah ee dhul beereedka.
Waxa uu soo bandhigay cadeymo muuqda oo sheegaya sida dhulka Ogadenia gabi ahaanba loo qeybsaday ee loogu qeybiyay shirkadaha Shidaalka iyo Shirkadaha laga gaday dhulka si ay u beertaan. oo gabi ahaanba la kala go’gooyay iyadoo laga iibinayo shirkadahaas. Malaayiin Itoobiyaan ah oo larabo in lagu beero dhulka Ogadeniya ayuu iyana xogag kasiiyay shacabweynihii shirka kasoo qeyb galay.
Waxaa kale uu aad uga hadlay Halganka Ogadeniya iyo siyaasada Jabhada ONLF ee ku aadan- aaya ka tashiga Dhulka iyo Ummada Somalida Ogadeniya isaga oo ku cel celiyay maadey weedha ah gumeysi intuu jiro halganku wuu socon.
Waxa uu kusoo gabagabeeyay qudbadii Amaan isaga oo aad iyo aad ugu mahad celiyey dumarka Ogadeniya iyo dhalinyarada Ogadenia ee maanta u istaagay halganka Ogadenia iyaga oo albaabkasta garaacaya qadiyadana ay garab taaganyihiin sidii heer sare ay u gaadhsiin lahaayeen.
Shirkan oo dhamaan qeybaha Bulshada Somalida Ogadeniya iyo dadka taageera halganka Ogadeniya ee Malbourne ku dhaqan ay kasoo qeyb galeen ayaa waxa kale oo ka hadashay
Luul Cabdi Macalin oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Somalida Ogadenia Melbourne (OYSU) oo ka war bixisay wax qabadkii dhalinyarada dhowrkii bilood ee ugu dabeyey iyo waxay qabteen waxaa kale oo ay ku soo ban dhigtay halkaas muuqaalo iyo video documentary ah oo soo diyaariyeen ururka dhalinyarada ee Melbourne oo dhamaan dadkii ka soo qeyb galay shirka aad iyo aad ula dhaceyn aadna u qiiro galisay shacabkii madasha iskugu yimid. Waxaa kale Luul ku soo dhaweysay microphoneka Xoghayah OYSU Pacific Mudane Abditajir oo halkas ka soo jiidiyey warbixin yar oo kooban.
Dhamaadkii Shirka ayaa waxa halkaas laga qaaday heeso halgan oo uu ku luqeynayay Mohamed yare fanaanka dada yare heestan oo la dhaho dhalinyarada JWXO-
Sidoo kale waxa goob joog ahaa kana hadlay Abwaan abdalle nuur, Nuuradiin (Jamis) oo kawar bixiyey halganka Ogadenia markii ku biiray intuu jiray halkana ka soo jidiyey gabay wadani ah Abwaanka ayaa waxuu sameyey heeso badan iyo Riwayado badan oo kuwada saleysan qadiyada Ogadenia kuna gubaabinayey shacabka somaliweyn iyo somalida Ogadenia .
Shirka ayaa ku soo dhamaday jawi aad iyo aad u farax badan.